Grande Maison en Provence Family house in Provence - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguHugues
Indlu enkulu yosapho embindini weProvence/Indlu eProvence enepuli enamanzi ashushu
Le ndlu ikwiikhilomitha eziyi-7 ukusuka eOrange (Indawo Yemidlalo Yamandulo, iArc de Triomphe) kunye nemizuzu eyi-30 ukusuka eAvignon, le ndlu isandul 'ukulungiswa ye-220 m2 inamagumbi okulala ayi-6, ipuli enkulu yokuqubha (9price} 4) enekhava yokuzikhusela. Le ndlu inendawo enkulu yokuhlala enomoya otyhefayo ehambelana nekhitshi.
Ipuli inokufudunyezwa ngeendleko ezongezelelweyo kuxhomekeka kubude bexesha eliza kuhlalwa.
Amagumbi okulala ayi-4 kumgangatho osezantsi - kuquka igumbi lomntwana elineebhedi eziyi-3 nesofa ekwayibhedi - ii-Tvs eziyi-2 zixhumene ne-HD TV - zahlukaniswe ngomnyango we-asophonic. i-wifi, inkqubo ye-hi-fi kunye ne-cinema yasekhaya (i-blu ray /uhd player).
Ngaphantsi - kufikeleleka ngezitepsi zamaplanga - amagumbi okulala amabini: igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela lalo labucala elinomabonakude adibeneyo kunye negumbi elikhulu lokulala/i-TV/PS3 kunye neebhedi ezinkulu ezimbini.
I-TV edityanisiweyo: I-Netflix / i-Amazon
Indlu inebhedi yosana yeambrela nesitulo sokutyisela usana
Ukunikela ingqalelo : escalier sans rampe - ne convient pas aux enfants en
baswagengge Ifumaneka kufutshane neOrange (iimayile eziyi-5 - imidlalo yeqonga yaseRoma) kunye ne-30 mn ukusuka eAvignon, le ndlu isandul 'ukulungiswa (iimitha eziyi-220 square) inamagumbi ayi-6, ipuli enamanzi ashushu (+ 100 yeeYuro ngeveki ukuze kufudunyezwe) kunye nekhava yokhuseleko ethambileyo. Le ndlu inegumbi elikhulu lokuhlala elinekhitshi.
Amagumbi ayi-4 aneebhedi ezilala abantu ababini kumgangatho osezantsi - kuquka elinye elijoliswe kubantwana abaneebhedi ezintathu ezilala umntu omnye nebhedi enokutshintshwa kabini. iTV eyi-2 edityanisiweyo ye-HD kunye ne-Standard HD
Kumgangatho wokuqala, amanye amagumbi amabini, elinye linegumbi lokuhlambela labucala kunye neTV edityanisiweyo - elinye linebhedi enkulu enobukhulu obuyi-HD TV enkulu kunye nePS3.
I-Wifi, inkqubo yeemuvi zasekhaya.
Ikhothi yosana nesitulo sosana ziyafumaneka
Qaphela ukuba izitepsi azibafanelanga abantwana abancinci
I-HDTV ene-I-Amazon Prime Video, izitishi zeTV eziqhelekileyo, I-Chromecast, I-Netflix
Indlu ekwidolophana yasePiolenc kwindawo ethe cwaka kakhulu. Indawo yokungena nokuphuma kwi-A7 motorway eya kumzantsi.
Umbuki zindwendwe ngu- Hugues
Fan de cinéma en exil à Paris
Uza kwamkelwa xa ufika ukuze unikezele ngesitshixo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Piolenc